အဆိုပြိုင်ပွဲတွေကနေ ကျော်ကြားလာခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော်များ
On March 26, 2018 March 26, 2018 By fairy
အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်မှာ အဆိုပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးပေါ်လာနေသလို အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေကနေတဆင့် အောင်မြင်မှုတွေရနေကြပြီဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကိုလဲ တွေ့နေရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာလဲ အဆိုပြိုင်ပွဲလေးတွေဝင်ပြိုင်ရင်းကနေမှ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ ကဲ ကိုယ်သိတဲ့သူ ဘယ်သူတွေပါမလဲ စပ်စုကြည့်ရအောင်လား???
မအံ့သြလိုက်ပါနဲ့။ Beyonce တစ်ယောက်ကလည်း ၁၉၈၀/၉၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Star Search ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ။
Can’t stop the feeling သီချင်းပိုင်ရှင်ကလဲ Star Search အဆိုပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ဖူးခဲ့သူပါ။ ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်မရခဲ့ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဘဝကြီးမှာအောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တုန်းကဘယ်လိုတွေတောင်ချစ်စရာကောင်းလဲဆိုတာ အောက်က video မှာရှိုး?
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ DJ Got us Fallin in Love သီချင်းနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကိုဖမ်းစားခဲ့တဲ့ Usher ကလဲ သူ့အသက် ၁၃နှစ်တုန်းက Star Search မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုခွေထုတ်ပေးမယ့် တေးထုတ်လုပ်သူနဲ့ဆုံခဲ့ရတာပါ။
Star Search ကနေတက်လာခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ Aguilera တစ်ယောက်လဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
5 – Leona Lewis
Bleeding Love သီချင်းပိုင်ရှင် Leona Lewis ကတော့ The X Factor winner တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့သလိုပဲ အနုပညာလောကမှာလည်း လျှမ်းလျှမ်းတောက်ကျော်ကြားခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
Jesus Take the Wheel သီချင်းနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Carrie Underwood ကတော့ American Idol မှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် Idol တွေထဲကမှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Because of You သီချင်းနဲ့ အားလုံးရဲ့ ရင်ကိုကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Kelly Clarkson ကလည်း American Idol winner တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သူပါ။
ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာမဟုတ်ပဲ Stratford လို့ခေါ်တဲ့ မြို့ကလေးရဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယပဲရခဲ့တဲ့ Justin Bieber ဟာ Baby သီချင်းနဲ့ လူပေါင်းများစွာကိုဖမ်းစားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ခုထိလဲ အောင်မြင်နေဆဲပါပဲ။
The X Factor ရဲ့ နောက်ဆုံး boy band ဖြစ်တဲ့ One Direction ဟာ ပြိုင်ပွဲမှာ တတိယနဲ့ပဲကျေနပ်ခဲ့ရပေမယ့် လက်တွေ့ကမ္ဘာကြီးမှာတော့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
10 – Fifth Harmony
ဒီအဖွဲ့ကလည်း One Direction နည်းတူ The X Factor ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ girl band တစ်ခုပါ။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ဒီ ၂ဖွဲ့လုံးအတူတူလက်တွဲပြီး မလုပ်ကြတော့တာတစ်ခုပါပဲ ?
ပြိုင်ပွဲကြီးကြီးသေးသေးတွေကနေတဆင့် အောင်မြင်လာသူတွေအများကြီးရှိပေမယ့် လက်လှမ်းမှီသလောက်ပဲ စုစည်းထားတာမို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ပေးပါနော်။ နောက်တစ်ခါတွေမှာ ပိုပြီးစုံလင်အောင် တင်ပြပေးပါ့မယ်လို့ …………….
ကိုယ်တွေလဲ ဘဝမှာကျရှုံးမှုတွေကြုံရရင်တောင် အားမလျော့ဘဲဆက်ကြိုးစားရင် သူတို့တွေလိုပဲ တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်မှုရနိုင်တာမို့ အားကျအတုယူရအောင်လို့လဲ အားပေးချင်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: Mnet Music Chart ရဲ့ Top3သီချင်းတွေအကြောင်းကို စပ်စုကြည့်ကြရအောင်
NEXT POST Next post: LA မှာ ယာဉ်တိုက်မှုကြုံခဲ့ရတဲ့ Justin Bieber